I-ASUS, phakathi kwabo batyholwa ngokunyanzelwa kwexabiso | IPhone iindaba
I-ASUS, phakathi kwabo batyholwa ngobuqhetseba bexabiso
Kokunye kophando oluninzi lokungathembeki olukhutshwe namhlanje, iKhomishini yaseYurophu iqale ukukhupha ubungqina obuchaza ngokuthe ngqo nangokucacileyo ukuba iimveliso zetekhnoloji ezinje nge-ASUS, i-Denon kunye ne-Marantz, i-Philips kunye ne-Pioneer zinokutyholwa ngokusetyenziswa gwenxa kwedatha ngamaxabiso eemveliso zabo. .
Njengokuba kupapashwa kuqhubeka, iKhomishini ithi iinkampani zingayaphula imithetho yokhuphiswano ngokuthintela abathengisi abakwi-Intanethi eYurophu ukuba babe nenkululeko yokuzibekela amaxabiso emveliso yezi mveliso kubandakanya izixhobo zasekhaya, iilaptops kunye nezixhobo ze-hi-fi . Ezi nkampani zikwatyholwa ngokuba nefuthe kwiithegi zamaxabiso kwisikali esibanzi, njengoko abathengisi abaninzi basebenzisa isoftware etshintsha ngokuzenzekelayo ixabiso lemveliso ngokusekwe koko kukhuphisana nabo.
IKhomishini yaseYurophu nayo igqibe ekubeni ingabelani ngolwazi oluthe kratya malunga nophando ngeli xesha. Nangona kunjalo, kwinkampani enkulu efana nePhilips ubuncinci, khange ibe sisiganeko esingalindelwanga. Isithethi senkampani sathi uphando lokuqala kwizithintelo zamaxabiso lufumanise ukuba ixesha lezityholo zokugwetywa kwaqala ngo-2013 kwaye "sihleli sivulekile okoko sisebenzisana ngokupheleleyo neKhomishini yaseYurophu", ngakumbi ngoku kuba luphando olusemthethweni . Siqhakamshelane nazo zonke ezinye iinkampani ezichazwe kwingxelo ukunceda kuphando lwamachiza kwaye ulwazi oluthe kratya luya kukhutshwa xa sifumana impendulo.
Ngapha koko, i-ASUS ikhuphe ingxelo emfutshane, njengoko isenza kwiTaiwan Stock Exchange: "Sisebenzisana ngokubonakalayo nabasemagunyeni kuphando kwaye asinakho ukuphawula ngalo mbandela njengoko uqhubeka."
Umendo opheleleyo kwinqaku: IPhone iindaba » Izaziso » I-ASUS, phakathi kwabo batyholwa ngobuqhetseba bexabiso
I-Cydia 1.1.28 ishiya i-beta tag. Ngoku unokwenza ukuthenga kwi-iOS 10
Sebenzisa iSlit View kunye neSilayidi ngaphezulu kwaso nasiphi na isixhobo esingahambelaniyo neGorgone tweak